Mai Chibwe VekwaZimuto: Zvekurhojana mune nguva yacho yakakwana
Usajaira kungoda kurhojana nevarume/vakadzi vese vese iwe uchifunga kuti hausi hure. Zverhoji zvinoda munhu wawakajairira waunovata naye mazuva ese. Kana murume wako achishanda kure, shandisai kondhomu kana auya kumusha, otherwise unofa uri mwana mudiki. Varume havatembheki nokuti munhu anohi murume anongoda iwe muridzi ugare uchitapudza urume hwake muchigovana. Kwete kumuona kamwe chete pavhiki wobva wafunga kuti uri wega. Hazviitiki kuvarume vechiZimba izvozvo. usazviudza nhema. Kana ivo varume vacho vashoma vangatiudza kuti kana vari kure nguva refu havahuri.
Mazuvano tine ma CELL PHONE ekuti chero zvandada kuudza murume wangu ndinongomuudza pa TXT, Viber, FB, Email, chero. Unokwanisa kuudza murume kuti uri kufunga rhoji, mese muchiri kubasa. Iyewo anokuudza zvaari kufunga. Unomuporomisa zvimwe zvinhu oswera achingofunga kuti nhasi achazopiwa izvi neizvo. Kana uchishanda pane vanhu vasingahwisisi mutauro wako unokwamisa kufonerana nomurume pa LUNCH motaura. Unokwanisa kumubvunza kuti akakurongera chii nhasi chinofadza. Chirega apindure iwe hwikwa uchiisa challenge kana kukurudzira. Murume ngaazive kuti une freedom yokutaura zvaunoda, nokumubvunza zvaanoda. Vamwe varume vanosvoda kutaura. Vanongoda kuita chete pasina kutaura, kurudzirai kutaurirana.
Rhoji haina nguva. Kana ukangohwa kuti zemo rauya mese muripo nguva yacho munayo, udza umwe wako muende pari PRIVATE muite zvinodiwa kuita. Kana muri vaya vakajaira kungoitira pamubhedha chete chete, chiona kuti nguva yamunoita inowirirana nokuvapo kwezemo rako. Ini zemo rinowanda makuseniseni saka ndipo pandinoda ipapo. Murume anowandigwa manheru. Zvoreva kuti kubva tichangoroorana takakasira kuti manheru nemangwanani. Hazvirevi kuti masikati kana pakati peusiku hapana chichaitwa.
Gezai mese musati mandovatana. Kugeza kwakanaka kuti unosvika pamubhedha uchinhuhwirira zvakanaka. Kuti wapedza zuva rese uchingodikitira wosvika kumba wondovata wakadaro wofunga kuti murume/mukadzi achada zvinhu, kusahwisisa nyaya. Iva nomunhuhwi uri fresh. Wageza chipedzisawo nokugeza mazino kuti monokisana uwanikwe une freshness mumuromo.
Kumirira mukadzi anyorove:
Hino isu hatingonyorovi pese pese. Tinotoda kumbotamba tamba nokuisa fungwa pazvinhu. Chero ndange ndichiziva kuti ndichavatana nomurume, ndenge ndisina kunyorova kusvika tatanga kutamba tese, tombokisana ndombopurudzigwa muviri, ndomwiwa mazamu ndosvetwa huro matama, zheve, dumbu, guvhu, magaro opurudzigwawo, murume ombopinzawo mumwe wake muchitubu okwenyerera. Zvoitwa izvi kusvika kufema kwasiyana. Iye murume anenge atoti twiii kare, Varume havanonoki. Anenge ava kuda kutopinza, asi bodo ngaambomira kusvika mukadzi anyatsonyorova.
Nyaya yokupinzwa pakaoma inowanzoitwa nemagino asingazivi kuti mukadzi anotanga anyorova. Kozotiwo vakadzi vaneunyope hwekudzidza kushinya chombo vanofunga kuti kupinzwa pakaoma kunonakira murume kupfuura panyoro.
Kana mukadzi anyatsonyorova iye ega anohwa kuti ava kuda kuti achipinzwa. Iye ega anozvitorera chombo opinza, kana kubata chitubu chake akavhura kuti murume apinze. Kana wakafuratira murume zvinonetsa kubatsira murume kupinza saka rega aite ega. Iwe simudzira chiuno chete awane panhu nokukasira.
Varume chekererai nzara pamimwe yenyu. Kana ukapinza mumwe umwe chete kana miviri ukagofa kuWall yokumusoro wakananga kubhinzi asi uri mukati mechitubu, panonaka ipapo, Asizve kana une nzara dzinokwaransura zvinogwadza. Terera mukadzi kuti ari kuti kudii uye tarisa maitire ake.
Kana achida kuti uwedzere anokuvhurira kana kukuudza. Unokwanisawo kuita zvinhu zviviri kuti uku wakapinza mimwe uku uri kukisa kana kumwa zamu. Unotohwa kuti anyorova chaizvo kureva kuti zemo rawanda fungwa yoda kuti dai ndachipinzwa. Kana ari wako wemumba haasvodi kukuudza kuti chipinza. Ipapo iwewo unenge wosiririka kasiriri kamwe kakaita seoiri yakatsetseka inotsvedza asi isina hayo kuzowanda sezvemukadzi. Musi wandakatanga kuona kusiririka kwemurume ndakawana chiri chinhu chinotoshamisa kuti murume anonyorovawo sesu.
Kushinya chombo nechitubu: (Tarisa topic yokusimbisa masuru)
Mukadzi wese anofarira rhoji uye anoona chiri chinhu chakakosha anofanigwa kudzidzira kuti kana chombo chapinda anokwanisa kuchishinya zvokuti murume haakwanisi kungokoira madire. Unotanga waongorora makoirire acho wobva wati paya paanoti mvooo, pakunoda kudzokera kumashure iwe Kwiii, Regedzu, worelaxa. Iye omboita sokubuda woti mvoo futi iwe kwiii, regedzu. Kana wakazvidzidzira, hazvina basa kuti wakanyorova zvakadii kana kuti maita maitire api.
Kana wakaturika makumbo pamafudzi emurume zvinonetsa futi asi zvinongoita. Zviri nyore kana wakavata nedumbu murume achipinda nokumashure, kana kuti wakamufongorera, kana kuti uvete nomusana wakaisa piro pasi pemagaro uku wakakonchekera shoka kuseri kwemabvi ake. Zviri nyore futi kana wakavata nedivi murume ari shure, (unosimudza gumbo murume opinda, wodzikisa gumbo wogonya uku wodhefura musana kuti pekupinda pave nzvimbo iri nani ku murume.)
Asi zvinoda munhu anopurakitiza kusimbisa masuru nokuwana Rhythm yemurume uye zvinotora nguva. Kana ukaita mimba ukazvara mwana, unotanga futi kusimbisa nokuti mwana anotatamura chitubu komboita mwedzi mitatu uchiti ukakosora kana kuhotsira wozviwetera madomhwe maviri kana matatu, zvoreva kuti pakunovata tanga wageza.
Kana muchishandisa makondhomu mukadzi ndiye anopfekedza murume, kwete kurega achipfeka ega. Zvinoda maoko maviri. Mukadzi ndiye anoziva dambudziko remimba saka akapfekedza murume zvakanaka haaiti mimba. Pakupfekedza murume, unoisa kondomu pamusoro wechombo, wopuresa chihomwe chekumberi kwaro kuti mweya wese ubude, wadaro woroller kondhomu rese pachombo chimire iwe wakangopuresa kahomwe kaya kuti mweya usapindamo. Wapedza woregedza, unoona kahomwe kacho kuti hakana mweya. Kana kane mweya mukada kuita kanadaro kanoputika zvongofanana neasina kondomu.
Usapfeka makondomu maviri nokuti anokwizana obvaruka. Rimwe chete rikapfekwa zvakanaka rakakwana iroro. Makondhomu anoiswa mafuta ane mushonga wekuuraya urume saka usajaira kunanzwa chombo chakapfeka kondhomu. Kana watopfekedza murume, chimuvhurira hako apinze muchitubu mafuta aya achipo. Kana mukadazve kutamba tamba munopedzirisa mabvisa mafuta aya futi.
Kondhomu rinotatamuka saka rinokwanisa kupfekwa nechombo chese chese chero chakakura sei, asi pakuatenga, vanokubvunza kuti Small Medium or Large. Iwe chitengawo esaizi yako kana yomurume wako.
Maitire amunoda ari kwamuri mese asi inyaya inonetsa vamwe iyi nokuti vamwe varume vanongoda maitire amwe chete zuva nezuva. Iwe mukadzi ndiwe unotobatsira nokupira murume maitire. Kana wahwa kuti panhu panaka podawo kuti achiita, chingofunga maitire wobva wa ita zvaunoda, vata nomusana, nedumbu, norutivi, kusvika apinda mukati wozowedzera maitire. Kana wada kusimudza gumbo woturika pafudzi pake ndiwe. Kana murume asingadi zvawamupa anokuudza maitire aanoda. Usatambisa nguva uchimurambira, wabvisa bhurugwa kuti umuvhurire mukova apinde, chirega apinde.
Paanopinda kekutanga manakire acho unohwa muviri wese kudavira kuti pane chapinda. Zvinoita maSECONDS matatu kana mana asi dai zvairambe zvichidaro vamwe vedu dai takafa kare nokunakigwa. Asi zvinopera iwe wobva wada kukoirana nomurume kuti zvirambe zvichinaka saizvizvo. Vanoziva vanoti kunakigwa kwemukadzi tinotaimuza na faifi pane kwemurume. Hazviiti kuti mukadzi ari mumba make akasununguka agopinzwa agoitana nomurume kusvika apedza akangoti ziii. Hazviiti. Paanongopinza unoita PANIC yekunakigwa wongohwa zvobuda pamuromo zvausingahwisisi mutauro wacho.
Kana usina kugadzikana nomurume kana kuti mumba mune vamwe vanhu ndipo paunongoruma mazino woudza murume kuti kasira kupedza, iwe wongorega murume oita kusvika adiridzira iwe usina kupedza.
Kumboita seuri kutora Temperature:
Murume anofanigwa kudzidziswa discipline yokuti asangoti kupinda nokudiridzira pamwe chetepo. Kana murume apinza chombo toti wakavata nomusana iye ari pamusoro. Imbomirai kukoirana mumboita nguva makadaro pasina anopfakanyika kuzasi. Kana muchida kukisana, kisanai zvenyu muchihwa kunaka kwazvo. Kozoti mukadzi ndiye anotanga nokumunyungira chombo nechitubu chako kuita sezviya uchidya chiwhitsi mumuromo asi uchiita nechitubu. Zvinoda purakitizi asi kana wazvigona zvinonakira murume. Watanga kudaro haazogoni kungoramba asina zvaari kuita. Unoona otanga kukoira, iwe chimupa rhythm iri pasi pasi. Zvekumhanya ndezvevanotamba bhora. Pano tode nguva takapindana kudai. Kuwanda kwenguva ndiko kuwanda kwekunakigwa. Wapinzwa chombo kuti unakigwe. Pota uchibata chombo nemasuru yechitubu kuti Kwiii, zvikutu pachinopinda kwete pachinobuda. Kana usina shuwa kuti ndepapi isa maoko pamagaro emurume, Magaro paanodzikira pasi chombochiri kupinda muchitubu iwe uri kusimudzira chiuno, mosangana pakati. Muchinosangana kudai iwe chombo kwii, woverenga kuti one, woregedza, Murume otangazve kusimudza chiuno chake uwewo uchideredza chako. Mosanganazve pakati iwe chombo kwii nemasuru. Unotohwa achitadza kufema zvakanaka nokunakigwa. Ipapo iwe usangururamisa chombo pamwepo mukati mechitubu. Pota uchinobaisa pakasiyana siyana kuti chombo chikwizire mukati mese. Hazvinei kuti chikuru zvakadii, unongonakigwa chete.
Kukoira kwemurume kwakati siyanei nekwemukadzi. Murume anoita iyoyo THRUSTING yacho achida kuti mukadzi ahwe chombo chichipinda nokubuda muchitubu chichikwizira mumadziro echitubu kumativi ese uyewo chichinobayabaya kumberi uko, zvinova zvinoitisa mukadzi kushaya mafemero akagadzikana nokuda kwekunakigwa (gasping for air).
Saka anobayabaya uku achitenderedzawo chiuno. Ndiko kukoira kwacho. Kana iwewo mukadzi unotohwa murume okubatirira kuti awedzere kunyura uye chombo chisabuda ne MISTAKE paanokoira. Ukatarisa kumeso kwake unoona akafinyamisa kumeso, uku wohwa sekuti ari kushandisa mutswi muduri. ochiramba akadaro. Ukazoona okuti kwiii, omira kukoira oita seabatwa nerimwe shavi achingotaura zvisingahwisisiki, uku muviri wake uchiita sewabatwa negetsi, chiziva kuti ava kutokudiridza. Kana asina kukupfekera Kondhomu iwe usina muchato naye uye usiri kumwa mapiritsi, chiziva kuti mungangogadzira chimwana apapa. Urume hwemurume hunoitisa mwana kumukadzi.
Mhodzi dzemwana dzave kukavigwa. Ipapo kana wakavata nemusana uchikwanisa, purudzira panosangana magaro nemusana wemurume, uchiita seuri kudhirowa CIRCLE, pasina puresha, kana kuisa mumwe wako pakati pemagaro ake wonon'ona ipapo pane kabhonzo kemuswe paya. Twese twaanatwo anokusiira mukati, hapana chinosara. Unoita guvi reurume kukati zvokuti paanozobudisa chombo unoeredza.
Mukadzi kukoira kwake kugamuchira murume uye kumheya mheya kuti murume asanokwiza kana kubaya pamwepo paanonogumira mukati. Kusimudzira, kuzama kuti murume chombo chese chipinde muchitubu pa Downward thrust yemurume, upward yemukadzi. Uyezve kushinya murume nechitubu kuti kukwiza kuwedzere anakigwe.
Kumupa Rythm kuti asamhanyamhanya. Iyi ndiyo Rhizeni yokuti vanotaura vanoti sei vakadzi tisina basa nokukura kwechombo asi futi tichida kuti murume apinze chombo chese kana achirhoja? nyaya iripo ndeyokuti isu tine Psychology yedu ndeyokuita murume nhapwa (POSSESSION of my man) kuti ndihwe kuti ndewangu munhu uyu. Hazvina basa kuti ane hombe kana diki. Kana usina experience yevarume vakawanda hautombozivi kusiyana kwehombe kana diki. Unongoda rhoji chete.
Sipidhi yacho yemurume
Umwe noumwe munhu ane sipidhi yake yaanoda asi ini sokuona kwangu murume anoda sipidhi iri pamusoro haasi kwaye. Aiwazve bodo. ko ndomhanyireiko? Kana zvichinaka kudai rega zviite gore rese. Pane kuti
mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, imbozamawo kuti mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, wombomira wokisa kisa mukadzi wako womubatabata womusveta mazamu womunanzwa mutsiba, nezheve, wotanga futi nesipidhi iri pasi, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, mvoooo, uchiterea zvaari kutaura, nekuchemerera kwake, wongorora kuti zviri kumunakira sei kuti mangwana uzive zvokuita. Kana mukadzi aita Orgasm yake ndipo iwe murume wada hako kuti mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, mvo, ita hako zvinotondinakirawo ini panguva iyoyo.
Dzimwe nguva ndapedza asi murume asina kupedza, ngatimbomira nditure mafemo nyika imire kutenderera. Pamwe ndoda mvura ndimwe. (Ini rhoji inondiitisa zvese nyota nezhara) Ndadaro chifunga zvokundizadza urume. Yava nguva yako murume. Kana wada kufongoresa mukadzi, muudze afongore uite madiro. Chirega kufunga kuti mukadzi ari papi. koira madire ako iwe zvinokunakira kusvika wapedza. Pamwe mukadzi anoita imwe Orgasm futi asi hazvina basa.
Chombo handicho chinonaka. Munhu ane chombo ndiye anonaka. Iva munhu anofarira kuhi unonaka nokuda kwekutanga warega mukadzi achiita ORGASM kukutangira iwe. Asi zvinoda DISCIPLINE uye kujaira kuti chombo chihwe kudziya chisingabudisi urume. Ndosaka ndati ukapinza imborega chirimo muchiita nyaya musingakoirani.
Kuwanda kweNguva yokurhojana.
Kubva pakupinzwa chombo murume ngaaitewo maminitsi anokwana 7 kana kupfuura, kuti mukadzi anakigwe zvakawanda. Dambudziko guru mudzimba umu randinonyoregwa ma Email naro nderokukasirisa kudiridzira. Varume havahwisisi kuti kana mukadzi avhura ari kudawo kunakigwa, saka koirawo zvine sipidhi iri pasi unonoke kupedza. Ukaona murume oda zvokupedza iwe uchiri kure, imbomirai mudzikere pakukisana nokubatabata. Mukadzi ndiye anofanigwa kutanga kupedzamurume ozotevera.
Kana pakaita ACCIDENT murume akatanga kupedza, ngaasabudisa chombo. Imborega chirimo mukadzi anokwanisa kuisa maoko ake pakati penyu ombokwizirira, kazhinji zvinoshanda, murume ozobudisa chombo mukadzi apedza. Chombo nguva zhinji hachikasiri kuvata. Unokwanisa kuita miniti imwe kana mbiri chichakamira zvishoma hazvo asi zviri nani kuti murume ave mukati pane kuti ave asimo panguva iyoyo.
Mapedza imbopedzaiwo kanguva makambundikirana. Varume musabatwa nehope mukadzi asinawo kupedza purizi. Mubvunze kuti “Ndokubatsira sei upedze?” Pamwe haadi hake kupedza ange achingoda kuti murume wake apedze. Isu tinongonakigwa chero pasina kupedza asi kupedza kunonaka zvakawedzera.
Muchangotanga kuroorana paya rhoji haitori nguva yakawanda nokuti chombo hachina kujaira kudziigwa, asi munenge muchiita kakawanda pazuva, nokuti murume anenge asina kujaira kuona mukadzi asina hembhe. Kunozoti mava nemwedzi yakati kuti unoona mava kutomboita nguva muchingoita musati mapedza, asizve munenge mava kuita kashoma pazuva rimwe chete. QUALITy inenge yawanda QUANTITY yadzikira. Kuvata menge mava kuvata futi. Mazuva okutanga unoswera uchingoshama n'ai zuva rese wavata wakasvinura muchiisana. Kana kuonda munotomboonda mese.
Mukadzi haangodi kuita Orgasm pese paanorhojana nomurume asi kusada kwacho ndekwake iye muridzi haasarudzigwi nomurume kuti nhasi anoda kana kuti haadi. Murume basa rake nderokuzama kupa mukadzi Orgasm yake sekupiwa kunoitwa murume. Kana iye mukadzi asingadi ipapo ndezvake anokurudzira murume kuti asamumirira.
Ukaona kwaita vhiki yese usina kupedzisa mukadzi ziva kuti wava kuita zvisina kunaka kumukadzi wako. Mubvunze kuti chii chingaitwa. Kana akachenjera anokuudza kuti wedzera kutamba usati wapinza chombo. Kana ukaona uchiita maminitsi maviri kana matatu, une dambudziko guru rinoda kuti undinyorere Email ndikuudze zvokuita nokuti mukadzi anongopiwa zvishoma haawani mufaro. Ndipo paunozoona oramba kuvatana newe aona kuti kutambisa nguva yake. Ukaona zvaramba, svitsa rurimi pabhinzi yake umboita nguva uripo wozopinza hako chombo.
Vakadzi tinoda kukudza varume vedu tichivapa konfidence yokuti vanogona kurhoja asi iwe wega murume ziva kuti hausi kugona kana uchitangira mukadzi kupedza. Mutemo werhoji unoti mukadzi ndiye anotanga kupedza. Mukadzi aita yake Orgasm, haipereri ipapo ukatoramba uri mukati inotowedzera futi. Chingorega zvokubata chibhinzi chake chete nokuti chinokwanisa kusazvida zvokubatwa kana aita Orgasm. Asi uku kuzasi ramba urimo kusvika wapedzawo. Hapana kana chakaipa.
Mukadzi wese chido chake kuzadzwa urume saka ramba uchiita kusvika hwabuda hwese. Isu tinotozvirova dundundu kana murume adurura hwese mukati mangu kuti ndagona. Chinhu chinofadza kuziva kuti murume kana aneni ndinokwanisa kumusiya asina urume andipa hwese, zvichireva kuti anondida uye anofunga kuti ndinonaka.
Asizve kuzoti hwava mumukadzi ambozorora zvinobhowa kuchitanga kuona kuti hwapukutwa zvakanaka. Ukabatwa nehope usina kupukuta unotohwa huchierera pakati pemagaro uvete nemanhede. Unokwanisa kuzomuka pamashitibheta panyorova nokuda kweurume hwabuda muchitubu uye kueredza kwechitubu pawange une zemo. Hapana chinotyisa. Ungopukuta ugozochinja mashitibheta ako mangwana. Pamwe unotowana paita guvi zvokuti kuzovatapo hazviiti. Kuti zvisaitika izvi, musati matanga wadzira tawero hombe pamubhedha. Tawero rinozonyorova haro asi mubhedha haunyorovi.
Pukutawo murume wako zvakanaka. ndicho chivanhu chedu. Murume haazvipukuti. Wapukuta mese maguta, chidzima rambi uchigumbatira murume muvate. Usarega murume achisuduruka achinovata kure newe. Inguva yenyu yokuisa moyo yenyu pamwe chete makagumbatirana mobatwa nehope makadaro. Varume vakawanda vanoita EXPERIENCE yekuva mwana mudiki panguva yokuti vapedza kudiridzira mukadzi. Unokwanisa kumumwisa zamu kana kumuisa musoro pachifuva kuti achibatwa nehope sezvaaiitwa namai vake ari mucheche. Inguva yokuyeuchidzana rudo pamaitire enyu. Iwe mukadzi ndiwe manager werudo. Ratidza kuti unofarira basa raitwa nomurume wako.
Ndiwo mafungire edu. Kana pasina chabuda mumurume ndoona sokuti basa ndakoniwa. Ndinotomirira kusvika murume azorora ndomuti please ngatiitezve. Urume kuhupiwa chinhu chikuru kumunhukadzi. Kuvata nomurume woshaya urume hwawapiwa zvinoshungurudza.
Dai varumewo vachifunganya sesu kana vatadza kugutsa mukadzi dai nyika yese ine vanhu vane mufaro chose. Varume havana anodzidzisa nyaya iyi asi ndiyo nyaya huru pakugarisana mumba. Mukadzi ngaagute mumba.
Ndinohwa varume vakawanda vanonyora vachikomburena kuti vakadzi vavo havadi kunyatsoshamwaridzana nechombo. zvoita sokuti vanotya kutamba nacho. Mukadzi ngaaite freedom yokuita zvaanoda nechombo chomurume wake, akada kutamba nacho achipurudzira achirezva, achitarisa zvachakaita, achitaura nacho, ndiye. Ndechakewo saka rega aite sharaude. Hino vamwe vanongochiiginowa kusvika chapinda muchitubu. Ipapo anenge asingatiombonyatsikuziva kuti chakadii.
Munhu zivawo mabatire okuta chombo kuti chikasire kumira. Kana murume akaneta, kana kuti avete iwe ukaita zemo unofanira kumutsa chombo. Ukasadaro unongoita zvokumirira murume paadira. Wogoti wakarooregwa chii zvino. Kana wawanikwa chitaridza kuti freedom yawanda. Wakavinga murume uyu. Hauna kuvinga mota yake kana imba yake. Murume ndiye mukuru pane zvese, ndiye waunoda, saka chitaridza rudo. Muviri wake ndewako, wako ndewake, zvino kana ukangogara usingazivi kuti muviri wake wakadii, uchamufadza sei?
Varume kungoisa ruokopo wopurudzira kaviri wofunga kuti zvakwana, bodo. Murume anofanira kuhwisisa mamirire akaita panhu pomukadzi wake. Kana mukadzi asina bhurugwa imboitawo nguva uchiongorora mamirire ezvinhu. Tarisa kuti chakafikidza bhinzi, iyo bhinzi, panobuda neweti, panopinda chombo, etc zvakamirisana sei. Iti mukadzi wako akuratidze kuti bhinzi inokwiziwa sei. Hakuna mukadzi asingazvikwizi bhinzi yake kana murume asipo, saka kana aripo ngaaratidzwe kuti zvinoitwa sei adzidzire kuzviita kumukadzi wake.
Kana une mukadzi ziva kuti haufaniri kuita nzara dzakareba pamimwe yako nokuti unokwaranzura pameri pemukadzi kana kupaisa zvigwere zvaunotakura munzara. Pota uchipinza mumwe umwe chete kana miviri mukati mechitubu uchikwenyerera umomo. Zvinonaka uye zvinorerusa masuro yechiuno. Zvinohi ukapinza chigumwe muchitubu mukadzi anowedzera kuvhura makumbo kureva kuti uri kuita zvaanoda. Unokwanisazve kuziva kuti anyorova zvakadii.
Pakudai taura uchikurudzira mukadzi, uchimubvunza kuti zviri kunaka here. Varume mune dambudziko rokuita rhoji makanyarara. Kutaura kunowedzera zemo.
Panopinda murume unohwa muviri wese kudavira. Kuti unoti zii zvinonetsa kana muri mega. Rega zvinobuda pamuromo zvibude zvega. Chero chawataura kana kuchemerera chakanaka ichocho. Chisina kunaka kungoita makanyarara mese. Munhu taridzawo appreciation yezvauri kupiwa nomurume wako. Ko unotyei murume ndewako. Iyewo kungoita akati zii bodo. Pamwe unoti woda kupa instruction wohi gondyo pamwe pasati pambosvikwa nechombo upenyu hwako hwese. Unobva wangobudisa zvime zvausingatogoni kana kuzvinyora. Kana wakapfavisa muviri unokwanisa kunyatsoita rhoji inonaka chaizvo, unotozvinzwa kusvika kuzvigumwe uchiita souri kupurudzigwa nekamuchini kemagetsi. Usanyarara kana kusatarisa murume.
Ini ndomboda kutevera chombo nefungwa ndichiona kwachiri muchitubu. Ndofunga kuti chiri kupatsanisa mativi echitubu chichipindamo chichinogofa imomo. Ukatarisa kumeso kwemurume kana makatarisana unoona kuti ari kutonakigwa uye ndiwe uri kunaka. Ukaramba uchizvifunga unohwa wobitirigwa nezemo wosvika pokuti kana fungwa hadzichashandi. Inohwa wava kunyikwa mumadhaka maziso haachaoni, wongobatirira murume kuti kana tichifa ngatichifa tese.
Chombo/chitubu chinhu chinonaka uye zemo chinhu chine simba pafungwa yemunhu. Kana waita zemo unenge uchifanira kuti uwane munhu wekurhojana naye. Munhu wacho murume/mukadzi wako. Kana unaye mumba dzidza kuti pamunoita moita zviri pamusorosoro pemaitire anonaka. Kana watobvisa bhurugwa ukabata chombo/chitubu chomurume/mukadzi nemaoko, chauchasvoda ipapo chii? Chifunga zvokuita FREEDOM OF EXPRESSION pakunakigwa nomurume/mukadzi wako.
Kana usina mukadzi/murume asi uchihwa kuti muviri wako unogaroita zemo, zvoreva kuti wakura zvokufanira kuchitanga kutsvaka wekuroorana naye.
kuiswa nemukomanamabatirwo emurume pabonde
Posted by Mai E Chibwe at 15:38
ndingashandisa rurimi pakutamba nechibhinzi here?zviri health here since rurimindezve food whilist chibhinzi ndezve reproduction
Rurimi gune mabasa akawanda. kana murimumba munotaurirana nokuda kwerurimi. Munotukana nokuda kwerurimi. Munodya zvokudya nokuda kwerurimi. Munokisana nokuda kwerurimi. Uchaonazve kuti pakugeza mazino munhu anotsvanzvadzira mazino ake norurimi.
Hino pese apa kapana Health issue munu waunokisana naya ange anechigwere. Zvokudya zvaunodya zvaiswa chepfu, etc.
Pakusvitsa rurimi pabhinzi hazvina health issue kkana muzvinabhinzi wacho abva mukugeza. Ini sokuona kwangu chero zvodii hazvo chinhu chakanaka kujaira kuti moda kunvata motanga mageza, mogezawoo mazino. Hapana health issue otherwise mabhuru emombe, mabhizarume, imbwa, zvese zvakawanda zvaidai zvakafa, nokuti kufembedza panhu pemhuka hadzi hazviregwi.
Chimwezve ndechokuti bhinzi hainei ne REPRODUCTION. Bhinzi ndeye kunakigwa kwevanhukadzi chete chete. Reproduction iri kuzasi kwebhinzi kunopinzwa chombo.
Kana wabvisigwa bhurugwa na mai mwana, imbozvibvunza wega kuti ko ndoiteiko nebhinzi yake? Munotiregerera pabhinzi apa vana saimba. imbotiwedzeraiwomufaro.
chombo changu chese hachipide munavadzimai, vakatota, ndanyengetedza vanoti hazvichaita kuti ipinde yose. ndingaita sei kuti ndinakidze mukadzi ndisingamukuvadze
Apa zvawataura handina kuzvihwisisa. Chinokutadzisa kupinza chombomumukadzi chiiko. Kana mukadzi wako achitya kupinzwa chombo zvinongoreva kuti ane Condition inonzi PHOBIA yechomb. Inowanikwa kuvakadzi vashomanana munyika dzakawanda. Enda naya ku Counselling andobatsigwa. pamwe akambobatwa chibharo ari mwana mudiki.
Hakuna chinokuvadzi pakupinzwa chombo kana mukadzi anyorova.
Kozotizve kana matanga kupinzana zvokuzoti murume ari mukati motanga kutaurirana kuti pinzza hafu kana kota hazviiti nokuda kwekunaka kuchiito chacho. Pamwe mukadzi anototsinzinira mazis zvokuti haatombooni uti chombo chapindazvakdii. Iye ega anotosimudzirawo chiuno kugashira chombo. Munhu wemukadzi unosvika akubatirira murume kuti anyatsoti ndi paduze achiita zvokuti pasaita ACCIDENT yokubuda musati mapedzi nokuti zvinokanganisa RHYTHM yacho zvichizononotsa kupedza kwemukadzi.
Kana akavata nembu panosvika pakuti mukadzi anoda kukwizwa mukati pamzvimbo dzakasiyana ureva kuti masimudzire aanoita zviuno nokugamuchirawo murume, nokusaruramisa zvakanaka, zvese zvinoita abatwe nechombo panzvimbo dzakasiyana mukati.
Hazviiti pakadaro kuti azoti pinza hafu. kutotsvakka mukana wekupatsanisa makumbo kuti chese chmbo chivemomukati.
Kana mangotanga kupinzana chete, zemo rinobva ratora nyaya yese roiita yaro kusvika rapera. Kurhizena kwemusoro kunozodzoka maedza.
Kana uchiona mukadzi wako asingadi Pane nyaya dzamunadzo mumba menyu. gadzirisai pauviri hwenyu.
Chombo chaka bhenderera kuruboshwe, zvinganditadzisa kuita bonde here?
Verenga pakahi chombo chakabhendha sebhanana.
Kubhendha kwechombo hakunei nenyaya yerhoji. Varume vashomanana vane chombo chakarurama. Kunohi varume vakadai vane LIKELIHOOD yokuita mental illness.
Zvinonyatsonaka kana mukadzi ayine mazitinji mahombe wonyatsoma bovera ese mumuromo kunge uchazvidzipa paunopinza chombo woudzamudzimai kuti anyatso vhura matinji nemaoko ake wosara uri iwe chete wakatarisana nechitubu ini ndinoita shura mufunge
Zvinonakira aniko, iwe kana mukadzi? Kuti mukadzi anakigwe, isa fungwa yako iwe murume pabhinzi yake. Zvokupinzwa chombo ndizvo hazvo asi bhinzi veduwee. Zivaivo kuti imi mune chombo isu tine bhinzi. Ndizvi zviviri zvakafanana izvozvo asi kuti zvinohi bhinzi inonakira mukadzi kupfuura kunakigwa kwemurume nechombo chake. BHINZI Iri kudawo kutambwa nayo. Matinji ndiwo hawo asi BHINZI ndiyo huru pabasa.